FBC - Amanamtummaan mootummaa ummatasaafi -Muummee ministiraa Haaylamaariyaam
Amanamtummaan mootummaa ummatasaafi -Muummee ministiraa Haaylamaariyaam
Finfinnee, Ebila 11,2009(FBC) -Muummeen Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalany har’a miidiyaalee biyya keessaaf ibsa laatan.
Ibsi isaan laatanis haaromsa biyyattiitti gaggeeffame, dhimmoota baha Afrikaa fi Ityoophiyaa akkasumas Koomiishiniin Mirga Namoomaa Ityoophiyaa qorannoo rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumamee turerratti gaggeessuun kaleessa Mana Maree Bakka Bu’ootaaf dhiyeesserrattis kan xiyyeeffate ture.
Miidiyaalenis jeequmsa uumamee turerratti qaamoleen hirmaatan akka itti gaafataman mootummaan ammam kutannoo qaba kan jedhu gaafataniit turan.
Muummeen Ministiraa Haaylamaariyaam Dassaalanyis akkuma koomiishinichi gabaasa isaatin dhiyeessetti mootummaan biyyattiis kutannoo cimaa qaba jedhan.
Walabummaa koomiishinichaarrattis gaaffii ka’eefis muummeen ministiraa yaada laataniin, amanamtummaan mootummaa ummata isaatif waan ta’eef, ummata waan dhoksinu tokkollee hin qabnu jedhan.
Qaamoleen dhimmicha qorachuuf yaada dhiyeessan jiraatanis, gaaffiin isaanii walabummaa biyyattii waliin waan wal qabatuuf, sanammoo mootummaan akka hin eeyyamne eeranii, Dhaabbanni Mootummota Gamtooman Jeneevaa waliin garuu waliigaluun gabaasicha fudhatee beekamtii laachuu isaatin waliinis hojjechaa jirra jedhan.
Hariiroo Ityoophiyaan Gibtsi waliin qabdurrattis yaada laataniinis, imaammanni hariiroo Ityoophiyaan biyyootya alaarratti hordoftu wal amantaa, wal kabaja, jaalala, wal fayyaduu fi nageenyan waliin jiraachuurratti kan bu’uure waan ta’eef, ishee waliinis sanuma hordofna jedhan.
Gibtsis waan Ityoophiyaa miidhuu danda’u biyya isheetii akka baastuu fi Ityoophiyaanis sana akka raawwattu mari’annee waliigalleerra jedhan muummeen ministiraa.
Dhaabbilee Gibtsi keessa turan; rakkoo nageenyaa Ityoophiyaatti mudatee keessaayis harka kan qaban biyyattiin ari'uushees muummeen ministiraa himaniiru.
Ityoophiyaan biyyoota Afrikaafis karra waan taatef, biyyoonni Awrooppaas ta’e Arabaa Ityoophiyaa waliin hojjechuu ni barbaadu jedhanii, biyyoota Arabaa baha Afrikaatti hojjechuu barbaadan akka sodaatti ilaaluunis hin barbaachisu jedhaniiru.
Oduuwwan Biroo « Paartileen siyaasaa ajandaalee 3rratti mari’atan	Naannoon Oromiyaa fi Somaalee murtoo sagalee ummataa 1997 hojiirra oolchuuf waliigalan »